Mayelana NATHI | IZhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
IZhongrong Technology Corporation Ltd.
Thuthukisa inqubekela phambili yezenhlalakahle ngokusungula okusha kwesayensi
IZhongrong Technology Corporation Co., Ltd. (ikhodi yamasheya: 836455), yasungulwa ngo-1999 okungenye yamabhizinisi amaShayina Kazwelonke Asezingeni Eliphakeme agxile ku-R & D, ukukhiqizwa nokumakethwa kwe-ethanol engeyona okusanhlamvu nemikhiqizo yayo esezansi. Ingumkhiqizi omkhulu we-ethanol ongekho okusanhlamvu eChina, nomkhiqizi omkhulu we-acetate eNyakatho yeChina naseNyakatho-Mpumalanga yeChina. Imikhiqizo ithengiswe ezimakethe zombili zasekhaya nase-Asia, emazweni aseYurophu ngenzuzo yonyaka eyi-USD150 million. Inezinkampani ezingasizi eziphethwe ngokuphelele, iTangshan Zhongrong Technology Co., Ltd neShanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
Sigxila emkhakheni wemboni yamakhemikhali, amakhemikhali enza imithi, amakhemikhali amahle namandla amasha ngenhloso yokukhuthaza inqubekela phambili yezenhlalakahle ngokusebenzisa isayensi esimeme emisha egxile ku-R & D, ukukhiqizwa, ukumakethwa kwe-ethanol engeyona okusanhlamvu kanye nemikhiqizo yayo engenhla nemifula, futhi uzinikele ekubeni ngumhlinzeki ngokuncintisana kakhulu we-ethanol engeyona okusanhlamvu.
IZhongrong Technology Corporation Ltd. iphethe isikhungo se-R & D sesi-3 sesiFundazwe futhi ithole impumelelo engaphezu kweshumi nanye kwezesayensi nezobuchwepheshe ezingaphezulu kwamazinga okuhola asekhaya, kanye namalungelo obunikazi angaphezu kwamashumi amane nambili. Kuyintokozo enkulu ukuthi sesiqalise uHlelo Lukazwelonke Lethoshi kanye noHlelo Lukazwelonke Lomkhiqizo Omusha Osemqoka. Siyinkampani yokuqala eChina ukuthuthukisa i-ethanol engeyona okusanhlamvu nokwenza impumelelo kanye namalungelo obunikazi ahlobene nawo. Sineziphiwo eziphezulu zokuphatha nezobuchwepheshe ezivela emanyuvesi amaningi adumile, futhi sesibe yisiqalisi nomakhi we-standard ethyl ye-ethyl ye-China.
IZhongrong Technology yiyunithi yomqondisi omkhulu weChina Alcohol Association, iyunithi yomqondisi weChina Green Development Alliance, kanye nebhizinisi lokukhombisa ubuchwepheshe emisha ezimbonini zaseChina kaphethiloli namakhemikhali. Kuyo yonke le minyaka, siqongelele amakhasimende wokubambisana esikhathi eside anele futhi sakhe uhlelo olubanzi lokuthengisa inethiwekhi, olungagcini nje ngokuhlanganisa izwe lonke, kodwa futhi oluthumela nezimakethe zase-Asia, zaseYurophu nezaseNingizimu Melika. Ngaphezu kokukhuthazwa kokuthengiswa kwe-Intanethi ngokwesiko, inkampani iphinde yasayina isivumelwano sokusebenzisana namasu amakhulu ahlanganisa umkhiqizo wamakhemikhali wokuvumela imikhiqizo yenkampani ukuthi isebenzele amakhasimende amaningi. Siyethemba abantu abanezimiso eziphakeme bangaba amaklayenti ethu.
Ngokususelwa ku-ethanol engeyona okusanhlamvu, sigqugquzela ukwakhiwa kwephrojekthi yokukhiqiza i-ethanol sisebenzisa imboni yensimbi igesi yomsila, nokwenziwa kobuchwepheshe be-ethanol ye-cellulosic, ukuqaphela ukuqaliswa kwezimboni ezenzekayo kwezomnotho, nokuhlwaya ukufinyelela amathani ayisigidi we-ethyl ethanol umthamo wokukhiqiza ngaphakathi Iminyaka engu-3-5. Ngasikhathi sinye, sisebenzisa igesi yomsila ukukhipha i-hydrogen, sicwaninga ngokusetshenziswa kwenani eliphakeme elengezwe ngaphansi kwe-hydrogen energy, nokwakha isisekelo samandla esihlanzekile.
Isibonisi somthamo wokukhiqiza
Le nkampani igxile kakhulu ezinhlotsheni ezimbili zemizila yezobuchwepheshe: izinqubo zamakhemikhali nezebhayoloji. Phakathi kwazo, ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwamathuluzi angama-300,000 okhiqiza uphethiloli we-ethanol kusetshenziswa igesi yensimbi yensimbi, okukhipha minyaka yonke amathani ayi-15,000 wedivayisi yokubonisa ye-ethyl ethanol esebenzisa ama-biogas, kanye namathani ayi-10,000 amadivayisi wemishini ye-hexane ubuchwepheshe bethu bokuzimela obuthuthukisiwe eminyakeni emihlanu edlule.
Umthamo wokukhiqiza wamanje: 150,000 ton of Ethyl Ethanol, 300,000 tons of Ethyl Acetate, 50,000 tons of Edible Alcohol, 15,000 tons of N-propyl acetate, 10,000 tons of 1,6-hexanediol, and 4000 tons of Enzyme.